XOG RASMI AH: Maxaa ka soo baxay wada hadalo dhexmaray M/weyne kuxigeenka Puntland & Isimadda Beesha Dhulbahante loogana hadlay Doorashada 2019? – Puntlandtimes
XOG RASMI AH: Maxaa ka soo baxay wada hadalo dhexmaray M/weyne kuxigeenka Puntland & Isimadda Beesha Dhulbahante loogana hadlay Doorashada 2019?
October 17, 2018 W LAASCAANO
GAROOWE(P-TIMES) – Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in u jiray kulan gaar ah oo dhexmaray Madaxweyne kuxigeenka Puntland Eng CabdiXakiim Cumar Camay iyo Isimadda beeshiisa oo ay uga wada hadleen doorashada mandiqada ee soo wajahan iyo arrimaha ku saabsan dib u soo celinta magaalada Laascaanood.
Kulanka oo dhaca labo maalmood kahor ayaa intii uu socday dhinacyadu keenen fikrado kala duwan, gaar ahaana dhinaca Xukuumadda ayaa la sheegay in ay ka timi soo jeedinta ah in ay dagaal diyaar u tahay oo ay dib u soo celinayso gobalka Sool, loogana baahan yahay Isimaddu in ay door ka qaataan.
Mid kamid ah Isimaddii ka qeybgalay kulanka ayaa u sheegay warsidaha Puntlandtimes.com in mudadii uu socday lasoo qaaday hindisaha ku aadan in mudo kororsi loo sameyo Hay’addaha dawliga ah ee Puntland, maadaama dagaal iyo doorasho aan laysku wadi Karin.
Xogtu waxay sheegaysaa in aad loogu kala duwanaaday kulamadaas iyo fikradaha ka soo baxayba, isla markaasna uu ku soo dhamaaday in aan waxba ka soo bixin.
Mid kamid ah Isimadda ayaa u sheegay Madaxweyne kuxigeenka iyo xubnaha ka socda garabka dawladda in ay 4 sanno iyo dheeraad haysteen kuraasta Madaxtinimada, ayna waxba ka qaban waayeen soo celinta Laascaanood, waqtigan oo gabaabsi ahna aysan ku qabin aaminaad ay ku soo celin karaan, taas bedelkeedana looga baahan yahay in ay gutaan waajibaadkooda saaran, iyagoon doorashada ka fakarin.
Garaad Saleebaan Garaad Maxamed ayaa horboodayay mashruuc ku saleysan in dagaal la qaado, isla markaasna Isimadda dhulbahante aysan soo xulin 17ka xildhibaan ee uga qeybta noqonaya doorashada nagu soo aadan, taas oo ahayd mid ay diideen Isimadda badankooda.
Sidaas oo kale fikradda ka dhalatay kulan gaar ah oo ay Isimaddu yeesheen logana hadli lahaa arrimahaas ayaa fashilantay, markii xubnaha Isimaddu ay sheegeen in aysan u kala eexan doonin musharaxiinta u taagan Madaxweyne-nimada Puntland.
Arrimahan ayaa u muuqday kuwa soo socday maalmihii u dambeeyey, waxaana muuqata in ay Xukuumadda hadda xooga saarayso talaabo kasta oo ay hoos ugu dhigi karto hanaanka doorashada Madaxtinimada Puntland oo hadda lagu jiro xulida xubnaha golaha baarlamaanka oo ay shaqsiyaad badan ku loolamayaan.
Nin il la’, oo Wariye ah, warbixintiissii iga dheh!